Njikọ ahịa: Funtọ na vidiyo | Martech Zone
Iwulite ikpo okwu maka ulo oru na blog bu ihe gara nke oma ma oburu na ndi ahia ahu na akwado ikpo okwu a. Anyị maara na ndị ahịa anyị ga-enwe ihe ịga nke ọma n'ịlaghachi na ntinye ego ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịme ha ka ha kee ma kesaa ozi banyere ngwaahịa na ọrụ ha.
Ihe eji eme Platform chọrọ ka sọftụwia ahụ dị ka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ezie nwere atụmatụ iji hụ na itinye n'ọrụ. Site na ịbanye site na nlekota nlekota, ikpo okwu kwesiri ịlele iji hụ na ị na-ebuli elu ikpo okwu. Ọ dị mma dị mfe… itinye n'ọrụ na-eduga na nsonaazụ, nsonaazụ na-eduga na nloghachi na itinye ego, yana nloghachi nke itinye ego na-eduga na mmegharị ndị ahịa na mmeba.
Mgbe anyị hụrụ otu itinye anyị n'ọrụ, anyị nwere ihe okike iji wepụta mkpọsa email nke webatara vidiyo vidio anaghị arụ ọrụ nke ọma iji jide ndị ahịa anyị.
Ọ bụrụ na ị ga-ahapụ ịdị umeala n’obi gị n’ọnụ ụzọ, i nwekwara ike biputere ya. Anyị na-eme ụfọdụ mgbasa ozi kpụ ọkụ n'ọnụ maka ndị ahịa ndị arụpụtaghị ọdịnaya ha.
Anyị wepụrụ nkwụsị niile ma nwee obere vidiyo maka ndị ahịa anyị. Edere ha site na iji iPhone, iMovie, na egwu ọdịyo ndabara. Anyị mepụtara ha niile n'otu ụbọchị wee chụpụ ha!
Vidio Egwuregwu Na-atọ ọchị: Biko Biputa!
Mgbe otu izu gasịrị, nsonaazụ ahụ dị mma maka ọtụtụ ndị ahịa anyị, yabụ anyị hapụrụ ha email taa iji kelee ha.
Fun Marketing Video: biputere, Echekwara Doug!
Ma n'ezie, ndị ahịa anyị na-arịdaghị efere ahụ nwetara ozi ọzọ.
Egwuregwu Mgbasa Ozi Na-atọ ọchị: n't bidoghị, Doug adịghị echekwa!
Ngosipụta: Abụ m onye na-eketa oke na ngalaba-onye guzobere Compendium Blogware.
Tags: ịde blọgụkomendiumiphonenkwalisaasvideo akavideo njemvideos
Appirio jikọọ Salesforce na Facebook
Kwụsị Ikwusa Social Networks na Business
Feb 3, 2009 na 6:45 PM
Feb 3, 2009 na 6:49 PM
Na m rịọ mgbaghara maka mkpọchi ahụ :), Abụ m otu n'ime ndị ekwesịrị ide maka Sigma Micro's Ecommerce Gurus - Blọgụ Compendium na ihere na-erubeghị !.
Feb 3, 2009 na 8:49 PM
Kedu ihe ọ ga - ewe iji mee ka ị gbapụta ụfọdụ posts? M na-ekwu na ezi obi - ga-ahụ nzaghachi gị!